दिल निशानी मगरलाई ज्वाला संग्रौलाको प्रश्न : ‘दिल दाजु, बाहुनले देश बिगारेकै भए, ‘प्रचण्ड बाहुन’लाई नाम्लो लाएर किन बोकेको ? – सुदूरखबर डटकम
दिल निशानी मगरलाई ज्वाला संग्रौलाको प्रश्न : ‘दिल दाजु, बाहुनले देश बिगारेकै भए, ‘प्रचण्ड बाहुन’लाई नाम्लो लाएर किन बोकेको ?
label समाचार प्रकाशक query_builder July, 27 2019
पछिल्लो समय समसामयिक बिषयमा प्रखर रुपमा कलम चलाउनेमध्येकी एक हुन् ज्वाला संग्रौला । उनले समाजमा रहेका विभिन्न खालका बिकृति र विसंगतिको बारेमा निर्भिक भएर खरो रुपमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिंदै आइरहेकी छन् । यसै क्रममा पत्रकार तथा युवा विश्लेषक दील निशानी मगरको एक स्टाटसको बिषयमा पनि संगौलाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले बाहुनले देश बिगारेकै भए, ‘प्रचण्ड बाहुन’लाई नाम्लो लाएर किन बोकेको दिल दाजु ? भन्दै मगरलाई प्रश्न सोधेकी छन् । उनको लेखलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै तल राखेका छौं ।
भर्खरै फेशबुकमा बाहुनले देश बिगारे भन्ने एउटा पोस्ट पढें। त्यहाँ बाहुन र जनजाति मित्रहरुका कमेन्ट क्रिया प्रतिक्रिया हुँदाहुदै मुख छोडाछोडको स्थिति समेत सृजना भैसकेको रहेछ। नजिकै भए त लात्ती हानाहान नै हुन्थ्यो होला! मलाई थाहा छैन यो पोस्ट कति सहि र कति गलत छ, तर यो म जान्दछु कि आठ फेलवाला ओली , मान्छे मारेर सत्ता क़ब्ज़ा गर्ने प्रचण्ड , भ्रस्टचार गरेर पार्टी र देश दुबैलाई भिरबाट खसाउने सेबदे, आफ्नै पतिको हत्या हुँदा पनि खोजिनिती नगर्ने र मनमा कसैप्रति दया नजाग्ने बिधा भण्डारी यी सब बाहुन हुन् । जस्ले देशलाई लुट्न सम्म लुटेका छन् बर्षौं देखि !
तर यो म अचम्म पर्छु कि कक्षा एकदेखि १२ सम्म निरन्तर प्रथम श्रेणीमा उतीर्ण भएर, क्षमता भएर , इमानदार भएर पनि देशमा स्थान नपाएपछि बिरक्त भएर जापानको हिरोशिमा र नागासाकी नजिकै खसेको क्षेत्रीबाहुन चाहिँ मैं हुँ। म जस्तै पिल्सिएका, ठगिएका, देशबाटै कुटिएका क्षेत्रीबाहुन हरु आज प्राय खाडीमा दुख गरिरहेछन्..! तर यो पनि सत्य हो कि देशमा आदिबासी जनजाति हरु हेपिएका साँच्चै हुन्। उनीहरु सुरुमा बाहुन नेताहरु बाटै हेपिए, पछि आफ्नै नेताहरुबाट समेत हेपिए।
सत्तामा आदिबासी जनजाति बाट पुगेका उपेन्द्र यादव, बर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती मगर, नन्द बहादुर पुन नबिना लामा यिनीहरु सब तिनै केपी र प्रचण्डको वरिपरि घुस र लुटतन्त्रको धुलो उडाएर बसेका छन्, तिनै देश लुट्ने बाहुनहरुसँह घाँटी जोडेर बसेका छन्, समग्रमा यिनीहरु आफैं बाहुन जस्ता भैसकेका छन्। यिनीहरुले जनजातिको मुद्दा कहाँ उठाए? आदिबासीको भत्किएको घर कहाँ देखे? कहाँ देखे उपेन्द्र यादवले तराईमा दाईजोको निहुमा जलेकी ती मधेसी समुदायकी किशोरीको क्षतबिक्षत शरिर जुन यादब आफैं आज देशका उपप्रधानमन्त्री भएर भुँडी फुलाएर बसेका छन्!
नन्दबहादुर पुन जो जनजातिका प्रतिनिधि हुन्, देशको उपरास्ट्रपतिको कुर्सी पड्काएका छन् तर हिजो द्वन्दकालमा लडाईमा आँखाको ज्योति गुमाएका, एउटै जनबादी गीतले उथलपुथल मच्चाईदिने, प्रचण्ड र बादलका दाहिने हात माईला लामा खालि बिप्लबलाई समर्थन गरेकै आधारमा समातिँदा किन हेरेर बसिरहेका? बिचरा यिनले केपी र प्रचण्ड हरुले जस्तो देश लुटेर हिडेका त छैनन् नि। यो गलत भयो भनेर किन आवाज नउठाएका यी जनजातिका सत्ताका सरदारहरुले???
तर पटक पटक बाहुनले देश बिगारेको भनिरहँदा दिल निशानी मगरले आफूले प्रचण्ड बाहुनलाई नाम्लो लगाएर बुई बोकेको तथ्य बिर्सेकोमा चाहिँ मलाई बडो ताज्जुब लागेको छ।
यदि बाहुनले देश बिगारेको हो भने दिल निशानि जस्ता आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधि आवाजहरुले प्रचण्ड ओली र भण्डारी जस्ता देश दोहन गर्नेहरुको हनुमानगिरी गर्न छाड्ने कि नछाड्ने ? मैले प्रचण्ड र केपीहरु देश चुस्ने जुकाहरु हुन् भन्दा मलाई तँ रबि लामिछानेकी पाँचौ बुडी होस् बेश्या होस् भनेर कमेन्ट गर्ने जनजाति दाजुभाईहरुका स्क्रिनसटहरु आजपनि मसँग छन्। त्यसलाई कस्तो रुपमा हेर्ने ?
तसर्थ यहाँ देश जातले हैन स्वार्थ र नियतले बिगारेको छ। बाहुनले देश बिगारे भन्ने जनजाति साथीहरु नै भोट दिने बेला प्रचण्ड र केपीको चाकडी गरेर हिड्ने अनि सामाजिक सन्जालका सोझा ,गरिब र दुईछाक टार्न खाडीतिर पसेका बाहुनहरु सँग लाप्पा पर्ने?
देशलाई अब बाहुन क्षेत्री जनजाति केही चाहिएको छैन, असल नेता चाहिएको छ, असल मानिस चाहिएको छ। देशको प्रधानमन्त्री सबैलाई मिलाएर लान सक्ने, भ्रष्टाचार बिरोधी , भिजनरी र डाइनामिक हुने हो भने २४ घण्टामा देशमा शान्ति आउँछ। प्रधानमन्त्रीको अनुहार सम्झेरै गरिबको मुहारमा खुसी छाओस् र भ्रस्टहरुको मुटुले हावा खाओस् न अनि पो देशमा परिवर्तनको युग सुरु हुन्छ त….!
यो जात त्यो जात हैन अब हामीले म नेपाली हुँ भन्ने मानसिकता बनाउनु पर्यो, म मान्छे हुँ भनेर आफूलाई उभ्याउनु पर्यो! नत्र जातिय द्वन्दले ध्वस्त भएको रुवाण्डा बन्न बेर लाग्दैन हाम्रो नेपाल!
थुप्रै पुस्तकहरु पढें ज़िन्दगीमा तर अब एउटा यस्तो पुस्तक पढ्न मन छ जहाँ देशको समृदिको मात्र इतिहाँस लेखिएको होस्! के यो सम्भव छ?